Nivoaka ny efitrano fivoriana ary nanao fanamarihana mikasika ity lalàna ity sy ny fomba nandaniana azy ireo solombavambahoaka Tiako I Madagasikara, avy amin’ny fanoherana.
Tsy voahajana ny andininy faha-89 sy 92 amin’ny Lalampanorenena mamaritra ny fe-potoana andinihana sy andaniana ny lalàna fehizoro, toy ny lalàna mifehy ny tetibola hoy ny depiote Hanitra Razafimanantsoa, nitondra teny azy ireo.
Natao hamehana, tao anatin’ny efatra andro ny fandaniana io lalàna io, hoy izy, nefa manana 30 andro ny depiote handinihana azy.
Teboka vitsivitsy mahakasika ity Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana lany teto amin'ny Antenimierampirenena ity :
- Tombanana ho 22,8% ny tahan’ny fampiasam-bola na ”taux d’investissement” amin’ny taona 2021, raha toa ka 17,8% izany tamin’ny taona 2020.
- Vinavinaina ho 4,5% ny tahantombon’ny toekarena amin’ny taona 2021.
- Tombanana ho 6,2% ny fisondrotry ny vidim-piainana hatramin’ny taona 2023. Nahitana olana teo amin’ny tontolon’ny famatsiana tamin’ny taona 2020 ka nahatonga fiantraikany ratsy eo amin’ny lafiny tolotra eny an-tsena.
- Andrasana ho 3 936.7 ny sandam-bola Dollar US / Ariary ho an’ny taona 2021.
- Tombanana ho 3 700 miliara Ariary ny fandaniam-bolam-panjakana amin’ny taona 2021, raha 2 757 miliara Ariary tamin’ny taona 2020.
- Momba ny fampandehanan-draharaha dia nidina teo amin’ ny 10% ny Minisitera rehetra.
- Momba ny fanabeazana dia miroso amin’ ny fiantsorohana ny saram-pidiran’ ireo mpianatra any amin’ ny Sekolim-panjakana fototra sy ny karaman’ ireo mpampianatra FRAM.
- Nampiakarina ho 25 miliara Ariary ny vola fanampiana ny Kaominina rehetra mitambatra.
- Hampiakarina 31,9% ny fandaniam-bola eo amin’ny lafiny sosialy raha 27,5% tamin’ny taona 2020.
- Novinavinaina ho 3 747, 72 miliara ariary ny fidiram-bola ara-ketra, ary 2 869,1 miliara ariary ny avy amin’ny Fadintseranana.